तेस्राे नेत्रका आभास दिने अङ्गहरु – www.kamalsfabulous.com/ibook
तेस्राे नेत्रका आभास दिने अङ्गहरु
मानव शरीरका ज्ञानेन्द्रिय अङ्गहरूकाे काम कार्यहरू विभिन्न अवस्था अनुसार केही भिन्न भिन्न हुँदा रहेछन् । त्यस ज्ञानेन्द्रिय अङ्गहरूका भिन्न कार्य क्षमता र अवस्थालाई दुइ भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ स्पर्शका साधारण र असाधारण अवस्थाहरु ।
साधारण अवस्थाः छाला, नाक, कान, मुख, जिब्रो, बोली, आँखा मानिसका ज्ञानेन्द्रियहरू हुन् । मानिसले देखेका सपनाहरूकाे अाधिकारिक रूपमा वा स्पष्ट अर्थ लगाएर त्यसकाे पालना गर्नु पर्छ भनेर भनिएकाे छैन । ती छाला, नाक, कान, मुख, जिब्रो, बोली, आँखाले गरेका स्पर्श त्यस स्पर्शसँग अाएकाे भावकाे सिधा अर्थ लगाइन्छ । अगाडि जुन चित्र देखिन्छन, त्यही भनेर चिनिन्छ र चित्त बुझाइन्छ । ती प्रत्यक्ष गरिएका स्पर्शहरू ज्ञानेन्द्रियका साधारण अवस्था हुन् ।
असाधारण अवस्थाः छाला, नाक, कान, मुख, जिब्रो, बोली, आँखा, सपना, त्यस स्पर्शको साथमा आएको भाव, त्यस स्पर्शसँग आएको चित्र र आँखा बन्द गरेको बेलामा पनि देखिने गरेका चित्र र भावहरुसबै मिलाएर तेस्राे नेत्रका अङ्गहरु हुन् । ज्ञानेन्द्रियहरूले प्रत्यक्ष गरिएका स्पर्शहरूमा ती स्पर्श गरिएका बस्तु वा चिजहरू अगाडि हुन्छन् र अरू उपस्थितहरूले पनि देख्ने वा स्पर्श गर्न सक्दछन् । तर तेस्राे नेत्रमा गरिएका स्पर्शहरू र चित्रहरू अरूले देख्दैनन् । तेस्राे नेत्रबाट देखिएका स्पर्श र चित्रहरू त्यस्तै तेस्राे नेत्र भएका र समान ज्ञान र भावना भएकाहरूले पनि देख्न सक्दछन् । मानिसले गरेका यस्ता स्पर्शका अनुभवहरू ज्ञानेन्द्रियहरूकाे असाधारण अवस्था हाे । यि सबै अङ्गहरुले गरेको असाधारण रुपमा प्राप्त गरिएको स्पर्श, चित्र, भाव सबै मिलाएर गरिएको तर्क, विश्लेषणबाट निस्केको अर्थ नै तेस्राे नेत्रको भाव हो । आज सम्मका मानिसले गर्दै आएको स्पर्शहरुको सिधा अर्थ लगाइन्थ्यो । अगाडि जुन चित्र देखिन्छन, त्यही भनेर चिनिन्छ र चित्त बुझाइन्छ । ती साधारण अवस्था हुन् । अर्थ नलाग्ने गरेका स्पर्शहरु, बढी स्पर्श भएकाहरु, वास्तविकतामा नभएका चित्रहरु, छायाँहरु जस्ता चित्रहरु, वास्तविकतामा नभएका आवाजहरु, बोलीहरु, डर, त्रास अनुभवहरु असाधारण अवस्था हुन् ।
यस्ता असाधारण स्पर्शहरू भएकाे अवस्थालाई अस्वस्थ अवस्था भन्न सकिन्छ भने काेही मानिस यस अवस्थाकाे अझै गहिराइमा पुगेर मानसिक राेगकाे अवस्था पुगिसकेर डाक्डरका निदाउने अाैषधी खाँदै जिन्दगी गुजारा गर्दै थिए । यस्ता असाधारण अवस्था परिवारमा काेही व्यक्तीलाई अाएकाे छ भने पटकपटकका अनुभव, अन्य परिवारका सदस्यहरुले समेत पटकपटक अलि कम मात्रामा त्यस्तै खालका स्पर्शहरू गर्ने गरेको स्पर्शहरुको हुन्छन् । मानिसलाई अाजसम्म यस बारेमा थाहा नभएकाे भएर ती समाचारहरू छताछुल्ल भएर चारैतिर पाेखिए जस्ताे भएकाे रहेछ । यसरी अाफैले र परिवारका अन्य सदस्य, नजिकका साथीहरू, चिनजानका व्यस्तीहरूबाट अाएकाे यस्ता अनुभवका समाचारहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर विश्लेषण गर्नु पर्दछ । त्यसरी सबै स्पर्शहरूलाई जाेडेर जानेकाे, अनुभवि व्यक्ती द्वारा निकालिएकाे अर्थ तेस्राे नेत्रकाे सही भाव हुन सक्छन् । यी अदृश्यहरुसँगको सम्पर्कको भुमरीमा प्रायः परिवारका सबै सदस्यहरु प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । परिवारका अन्य सदस्यहरुले पनि केही न केही स्पर्शहरु गर्ने गरेका हुन्छन् । किनकि त्यस अदृश्यहरु सँगको सम्पर्कमा यिनै परिवार र पारिवारिक कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् । यही सबैलार्इ जोडेर तर्क, विश्लेषण गरी अन्य लिँग शरीरसँगको सम्पर्क भइरेहेको अवस्था थाहा पाउन सक्दछौँ । यही अर्थ र भाव निकाल्नु नै तेस्राे नेत्रको भाव निकाल्ने तरिका हो ।
आखाँ चिम्म गरेर आउने दृश्य र भावः ती माथि उल्लेखित सबै तेस्राे नेत्रका स्पर्शका माध्यमहरु मध्य सपना र त्यसको भाव सबभन्दा सजिलो सम्पर्कको माध्यम हो । आखाँ चिम्म गरेर आउने दृश्य र त्यसको भाव तेश्रो नेत्रको सबभन्दा विकसित अवस्था हो ।
यसरी ज्ञानेन्द्रियहरूले गरेका असाधारण स्पर्शहरूलाई अाजसम्मकाे चिकित्साशास्त्रले सिधै मानसिक राेगकाे संज्ञा दिने र त्यसै अनुसारकाे अाैषधी उपचार गर्ने त्यस विषयका डाक्टरहरूकाे चलन छन् ।
तर यस किताबका लेखक डाक्टरहरूकाे अलि अर्कै तर्क छन् । ती असाधारण स्पर्शहरू अवश्य अस्वस्थ देखिन्छन् । तर ती स्पर्शहरूकाे अर्थ र भाव रहेछ । त्याे एक समाचार पाे हाे रहेछ । अवश्य पनि सबै विरामीका लक्षणहरू एउटै कारणका नहाेलान् । तर कतिपय बिरामीहरू जस्ले असाधारण अनुभवहरू गर्ने गरेका थिए, डाक्टर कहाँ पुगेर गुहार माग्न जाँदा मानसिक राेगीकाे सँज्ञा पाएका थिए र डाक्टरका निदाउने अाैषधी जीवनभर सेवन गर्न भनेर सेवन गर्दै थिए । त्यस्ता कतिपय बिरामीहरूकाे सही नामाकरण सही उपचार पछि अाजकाल स्वस्थ भएका छन् र निदाउने अाैषधी खान छाेडेका छन् । उदाहरणहरू यस किताबकाे प्रत्यक्ष भिडियाे भागमा समावेश गरिएकाे छ ।
ज्ञानेन्द्रियहरुले असाधारण स्पर्शहरु गर्न थाल्नुको दुइटा कारणहरु हुन सक्दछन्
१. स्थुल शरीरको कारण —स्थुल शरीरको ज्ञानेन्द्रिय ग्रन्थिहरुमा आएको शारीरिक गडबढी, कमजोरी, रोग, इत्यादीको कारण ग्रन्थिहरुले असाधारण स्पर्शहरु गर्न सक्दछन् । यी सबै कारणहरु आफ्ना विषयका विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा जाँच गरी त्यसको आवश्यक र उपलब्ध भए अनुसारको उपचारको व्यवस्था गर्ने हो ।
२. लिँग शरीरको कारण —
लिँग शरीरको कारणः
मानिसकाे शरीरकाे संचालन लिँग शरीरले गर्ने रहेछ । मानिसकाे लिँग शरीरमा नै कुनै कमजाेरी खरावी अाएमा पनि स्पर्शहरू असाधारण हुन सक्लान् । अन्य विभिन्न लिँग शरूिरहरूले पनि मानिससँग सम्पर्क सम्बन्ध राख्न चाहने रहेछन् र यीनै सम्पर्क र सम्बन्धका कारण त्यस्ता असाधारण स्पर्शहरू भएका रहेछन् ।
अाफ्ना मरेका पितृहरूकाे सम्झनाहरू बढी गर्नेहरूलाई ती पितृहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्धहरू हुन सक्दछन् । जानेर नजानेर भुत, प्रेत, बाेक्सीहरूकाे चर्चा खाेजी गर्नेहरूलाई तिनीहरू सँग सम्पर्क र सम्बन्धहरू हुन सक्दछन् । जाने वा नजानेर विभिन्न देवी देवताहरूकाे चर्चा, पूजा, अाराधना, ब्रत, ध्यान, जप अादी गर्नेहरूलाई पनि ती अन्जानमा रहेका देवी देवताहरूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध हुन सक्दछन् । यस्तै सम्पर्क र सम्बन्धका कारणहरू नै असाधारण स्पर्श वा तेस्राे नेत्रका कारणहरू हुन् ।
यदि मानिसकाे आफ्नो लिँग शरीरको मानसिकता कमजोर छ, निडर छैन, साधारण कुराहरुमा डराउछ, शरीर पनि कमजोर छ भने अन्य लिँग शरीरहरुले हेपेर स्पर्श गर्न आइ विभिन्न सम्पर्क र भोग गर्न खोज्दछन् । मानिस मानसिक रुपमा कमजोर छ, एक्लो छ, बुढाबुढी छ भने अन्य लिँग शरीरहरुले हेपेर स्पर्श गर्न खोज्दछन् र भोग गर्न खोज्दछन् । निर्दा र कमजोरहरुलाई चोरहरुले धम्काएर ठगेर लुटेर लाने भने जस्तै हो ।
मानिसमा अन्य लिँग शरीरले सम्पर्क राख्न खोज्नुको कारणहरु—
क. सब भन्दा प्रमुख कारण त त्यस मानिसले कुनै दिन कुनै लिँग शरीरहरुको कुरा, चर्चा गरेको थियो । त्यस्ता कहाँ मात्रै अन्य लिँग शरीरहरुले आँखा लगाउँछन् । किनकि ती चचाँ गर्नेहरुले मात्रै ती लिँग शरीरलाई केही मात्रामा भने पनि चिन्दछन् । नचिन्ने कहाँ आउन मन हुँदैन । अरु नचिन्ने कहाँ जाँदा ती अन्य लिँग शरीरहरुले छुन सक्ने प्वाल पनि हुँदैन । त्यसैले गाउघरमा विभिन्न रुढिवादी रुपमा भने पनि झारफुक गर्ने, त्यस्ता उपचार गराउने र उपचार गरिदिने दुबैलाई पटकपटक विभिन्न लिँग शरीरहरुले सम्पर्क गर्ने गरिराखेको हुन्छन् र दुःखकष्ट पुर्याइरहेका हुन्छन् । किन कि ती लिँग शरीरका ती दुबै थरिका मानिसले चर्चा गरिरहेका छन् । एक थरि बिरामीले एेया र आत्थु भनिरहेको छ अर्कोले त्यसलाई धपाउन कोसिस गरिरहेको छ । त्यो दुःख दिन आउने लिँग शरीरको ती दुबै जना कहाँभन्दा अन्त जाने कतै ठाउ छैन किनकि अरुले तिनीहरुलाई विश्वास गर्दैनन् र चिन्दैनन् । त्यसैले झाँक्रीले जत्ति कुचोले हाने पनि पछि जस्ताको त्यस्तै समस्या रहन्छ । एकै छिन यताउता गएर लुकेका हुन्छन् होला । केही दिनपछि फेरी त्यही समस्या आइरहेको हुन्छ । अझ नियालेर हेर्नेहो भने त्यस्ता झारफुक गरेर रोजगार चलाउनेहरुको घरका अन्य सदस्यहरुलाई पनि यस्ता सम्पर्कहरु भइराखेको हुनसक्दछ र कष्ट भइरहेको हुनसक्दछ । किनकि ती लिँग शरीरहरु उपचारपछि तिनै झारफुक गर्नेको पछिलाग्दै तिनको घरसम्म पुगेका हुनसक्दछन् । किनकि ती लिँग शरीरहरु कसैलाई दुःख दिन भनेर आएका होइनन् । तिनीहरु आफ्नो लागि गुहार माग्न आएका हुन् । जस्ले तिनीहरूको आवाज सुनेको जस्तो लाग्छ तिनीलाई नै बढी बोलाएर गुहार्ने हो । नसुन्ने वा नदेख्नेसँग गुहार माग्न मिल्दैन क्यारे ?
ख. अन्य लिँग शरीरले आफ्ना स्थुल शरीरलाई छुन सक्दछ र स्पर्श हुन सक्दछ ।
ग. अन्य लिँग शरीरले टाढैबाट जिस्क्याउने, आवाज दिने, आफ्नो परिचय जानकारी दिन चाहने, लिँग शरीरहरुको भाषामा सिठी हालेर हुटिङ्ग गरे जस्तो गर्न सक्दछ ।
घ. अन्य लिँग शरीरले आफ्नो स्थुल शरीरमा प्रवेश गरी भोग र शोषण गर्न सक्दछ ।
ङ. अन्य लिँग शरीरले आफ्नो लिँग शरीरलाई सम्पर्क गरी सम्बन्ध राख्न सक्दछ ।
च. अन्य लिँग शरीरले आफ्नो लिँग शरीर मार्फत समाचार पुर्याउन सक्दछ ।
दुष्ट लिँग शरीरहरुले सम्पर्क गर्न सकेको सुरुका अवस्थामा तिनीहरुले लुकेर शोषण र भोग गरिरहेका हुन्छन् । तिनीहरुले लुकेर शोषण गर्ने समयमा मानिसको शरीरमा अन्य कमजोरीहरु आइसकेका हुन सक्दछन् तर डराउने, तर्सने लक्षणहरु नहुन पनि सक्दछ । तर जव मानिसमा भएका कष्टहरुबाट बच्न बचावटका कार्यहरु गर्न थालेपछि बल्ल ती दुःख दिने गरेका लिँग शरीरहरुले छोड्न नमानेर अनेक दुःख दिन्छन् । मानिसले तेस्राे नेत्रका माध्यमद्वारा ती अदृश्यहरुको स्पर्श गर्न थालेको अवस्था त अझ मानिसमा बचावटका विधिहरु सुरु हुन जाँदा रिसाएर छोड्न नमानेकाहरुको प्रहारहरु हो । नत्र लुकेर खाएको अवस्था त धेरै समयसम्म थाहा नहुन पनि सक्दछ । यसरी अचानक आफै बचावटका काम सुरु हुनुको कारण त्यहाँ लिँग शरीरको संसारमा पनि हामीलाई मद्दत गर्न मन पराउने होस खुलेका लिँग शरीरहरु हुन्छन् र तिनीहरुले मद्दत गर्दछन् । कुनै दिन हामीले राम्रो पुण्यका कामहरु गरेका रहेछौँ भने त्यही हिसाबका कारण तिनीहरुले बचावट गरिदिने वा बचावटका उपायहरुमा पुर्याइदिने गर्दछन् ।
पुण्य काम भनेको दान दिने होइन । अरु कसैलाई आपद परेको स्थितीमा वा आपद पर्न सक्ने स्थितिमा आफै गएर आफ्नो भागबाट बाँडेर सहयोग पुर्याउनेलाई पुण्य काम भन्दछन् । यस्तो कामको त्यहाँ लिँग शरीरहरुको संसारमा विशेष हिसाब किताब राखिदो रहेछ । यहाँ दिएको त्यहाँ आफ्ना पितृले पाउँछन वा आफुले मरेपछि पाउँला भनेर गरेको दान पुण्य काम होइन रहेछ ।
यस्ता असाधारण स्पर्श, दृश्य, आवाज, बोली, गन्ध, सपनाहरु धेरै मानिसहरुमा भइरहेको हुन सक्दछ । कहिले कहीँ त्यस्ता असाधारण स्पर्शले कुनै नराम्रो असर पुर्याएको हुँदैन भने कहिले त्यस्तै स्पर्शहरुले घेरिएको जस्तो अनुभव हुन सक्दछ विभिन्न दुःख, कष्ट, रोगका लक्षणहरु देखिएका हुनसक्दछन् ।
असाधारण स्पर्शका शारीरिक कारणहरु—
हरेक जनावर र चरा चुरुङ्गीहरुको आफ्नो आफ्नो कामको अनुसार ज्ञानेन्द्रियका अङ्गहरु र क्षमताहरु बनेका हुन्छन् । कसैको जिब्रोले बढी काम गर्ने क्षमता हुन्छ । जस्तै कि सर्पले जिब्रोबाट धेरै कुरा थाहा पाउँछ । मुसा बिरालोले कानबाट धेरै कुरा थाहा पाउँछन् । कुकुरले नाकबाट धेरै कुरा थाहा पाउँछ । मानिसको जिब्रो, छाला, नाक त्यतिक विकसित हुँदैन । तर मानिसमा बोल्ने क्षमता, भाषा बोल्ने क्षमता, सुन्ने क्षमता, देख्ने र अर्थ लगाउने क्षमता बढी हुन्छ । मानिससँग सम्पर्क गर्न चाहने अन्य लिँग शरीरहरु पनि यिनै अङ्गहरुका चेतना भएकाहरु हुन् । यिनै अङ्गहरु मार्फत हामीसँग सम्पर्क गर्न खोजेका या गरिरहेको हुन्छ । सपना सब भन्दा उपयुक्त माध्यम हो । त्यसैद्धारा हामीसँग सम्पर्क गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सपना तेश्रो नेत्रको ग्रन्थि हो र प्रमुख अङ्ग हो ।
मानिसले विभिन्न समयमा एउटै सपना देख्दै आइरहेको हुन सक्दछन् । तर त्यस व्यक्तिले त्यस सपनाको कुनै अर्थ लगाउने गरेको छैन भने ती अन्य लिँग शरीरहरु जस्ले त्यस व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न खोजेका थिए, उनीहरु सम्पर्कका अन्य उपाय अपनाउन थाल्दछन् । सपनामानै तर्सने, झस्कने, चिच्चाउने हुन्छन् । यदि त्यस्तो गर्दा पनि त्यस व्यक्तिले बुझ्न सकेन र अर्थलगाउन सकेन भने कानमा आएर बोल्ने, दिउसो आँखा अगाडि चित्रहरु आउने, दिउसो निन्द्रा जस्तो तन्द्रा आउने, चित्रहरु आउने हुन्छ । यदि उसलाई सपनाको सही अर्थ लगाउन सक्ने कुनै व्यक्तिले उसले देख्ने गरेको सपनाको अर्थ लगाइदिन थाल्यो भने र ती अर्थ त्यो सपना देख्ने व्यक्तिले बुझेर आफ्नो व्यवहारमा ल्याउन थाल्यो भने, त्यस्ता अस्वस्थ सपनाहरु बन्द हुन्छन अन्य स्पर्शहरु बन्द हुन्छन् । अथवा एकदम कम भएर जान्छन् । कहिले कहीँ यसरी सपनामा झस्कने, चिच्चाउनेहरु डाक्टर र हस्पिटल धाइरहेका हुन्छन् । आफु र आफ्ना परिवारका लागि तनाव र दुःख पुर्याई रहेका हुन्छन् । यो कस्तो भएको भनेर एक उदाहरण दिन चाहन्छु । कुनै एक जना विद्यार्थीलाई उसको शिक्षकले कुनै काम दिएको छ । त्यस विद्यार्थीले त्यसकाम गरेर ल्याउँदैन । शिक्षक रिसाउँछ । भोलि पल्ट पुनः त्यही काम गर्न दिन्छ । विद्यार्थीले बुझ्दैन नगरिकन आउँछ । शिक्षक पुनः रिसाउँछ केही सँजाए दिन्छ । विद्यार्थी पुनः बुझ्दैन । शिक्षक रिसाएर कक्षामा केही बेर हल्लाखल्ला हुन्छ । अन्य विद्यार्थीको पढाईमा वाधा पर्न थालि सक्यो । शिक्षकले हेडमास्टरलाई भन्छ । हेडमास्टरले आफै आउँछ वा आफु कहाँ बोलाउँछ, विद्यार्थीलाई थर्काउछ । स्कुल वा कलेज भरि यसै विषयमा चर्चा हुन थाल्दछन् । हेडमास्टरले विद्यार्थीको आमाबुवालाई बोलाउँछ । त्यस्तै हो भने विद्यार्थीलाई निकाल्न पनि सकिन्छ भनेर धम्कि दिन्छ । सके विद्यार्थीका आमाबावुले विद्यार्थीलाई एकदुई थप्पड लगाउन पनि भ्याउँछन् । यसैगर्दै तनावका केही दिन बितेपछि धेरैजना प्रभावित भइरहेको बेलामा यदि कुनै जानेको मान्छेले त्यस विद्यार्थीले नबुझेको कुरा बुझाइ दिएमा त्यस विद्यार्थी एकै दिनमा त्यो शिक्षकले दिएको काम पुरागरि सबै समस्याको समाधान गरिदिन्छ । यस्ता खालका समस्याहरु जीवनमा घटिरहेका हुन्छन् भने त्यस अन्य लिँग शरीरको भन्न खोजेको सम्पर्कका कुराहरु नबुझ्दा यस्तै खालका घटना भइरहेको हुन्छन् ।
यसरी पटक पटक कुरा भन्न आउनेहरु अरु कोही होइनन् । आफ्ना पुरा होस नखुलेका पितृहरु र आफुले तिनीहरु प्रति मनको ढोका खुला राखेको कारण हो । त्यसरी खुला राखेको खुला ढोकाबाट आफ्ना पितृमात्रै नपसेर त्यस भेगका सबै राम्रा विचार र स्वभावकाहरु, नराम्रा विचार र स्वभावकाहरु अाएका हुन्छन् । ती सबै रमिता हेरौँ भनेर आएका भए पनि खुल्ला कुर्ची र सोफा, खुल्ला खानेकुरा राखेका भए हेरेर बस्न कसैलाई मन नलाग्न सक्दछ । पितृहरुले त्यसरी सम्पर्क गर्न खोज्नुको उद्देश्य कसैलाई दुःख दिनलाई होइन । त्यहाँ उसले पाएको अन्धकार, अन्योलताबाट बच्न सहारा र सहायताको गुहार माग्न आफ्नो सबभन्दा नजीकको सम्बन्ध भएको, उसको विचारमा अलि भरपर्दो छोरा वा छोरी कहाँँ आएको हो । हिन्दु संस्कृतिमा छोराहरुले मात्र पितृकार्यमा भाग र जिम्मेवारी दिइएको छ । तर त्यहाँ छोरा र छोरी भनेर छुट्याएको हुन्दैन । यहाँ जीवित हुँदा आफुले केही नदिएकाहरु भएपनि त्यस विपद कालमा जसले अलिकति सुनिदेला जस्तो छ त्यस कहाँ नै आएका हुन् । तिनीहरु बेहोसीमा गुहार माग्न नजान्ने जस्तो भएको भएर गुहार माग्दा हल्लाखल्ला, रुवावासी जस्तो भएको हो । जस्तै खोलामा डुव्दै गरेकाले अचानक कसैलाइ समात्न भ्यायो भने बेसरी जवरजस्ती समात्दा त्यस समातिने व्यक्ति वा सहयोग पुर्याउन खोज्ने व्यक्तिनै डुव्न सक्दछ त्यस्तै भएको हो । त्यस्तै भइरहेको हुँदोरहेछ धेरैजसो सम्पर्कका अवस्थाहरुमा । त्यो गुहार माग्न आउने पितृ अन्योलमा परेर बच्चा जस्तो भएको हुन्छ ।
ग्रन्थिहरुको तेश्रो नेत्रको अवश्थाः
शरीरका विभिन्न ग्रन्थिहरु हरेक जनावर आफ्नो प्रकृति र बाच्ने तरिका अनुसारको बनेको हुन्छ । तर प्राय ती सबै ग्रन्थिहरुमा आफ्नो जातलाई चाहिने भन्दा अन्य जनावरका क्षमताका गुणहरु निष्कृय रुपमा रहेका हुन्छन् । जस्तै मान्छेको सुन्ने क्षमता र चरा चुरुङ्गी वा अन्य जनावरको सुन्ने क्षमता फरक हुन्छ । त्यस्तै मान्छेको देख्ने क्षमता अन्य चराचुरुङ्गी वा जनावरको भन्दा फरक हुन्छ । सृष्टिमा जीवहरुको विकास हुँदै जाँदा नया जातका जीवहरुको विकास हुँदा जीवमा नया क्षमताहरु आएपनि ती पुराना क्षमताहरु शरीरका अङ्गहरुमा निस्कृय भएर लुकेररहेका हुन्छन् । जस्तै मानिसको शरीरमा कतिपय अङ्गहरु मानिसले प्रयोगमा ल्याउदैन । त्यस्ता अङ्गहरुलाई विज्ञानमा अल्पविकसित अङ्ग (rudimentary ) भन्ने चलन छ । भने त्यस्तैगरी मानिसको भइरहेको ज्ञानेन्द्रियका अङ्गहरुको कार्य क्षमतामा पनि केही अल्पविकसित (निष्कृय) क्षमताहरु रहेका हुनसक्दछन् । विभिन्न परिस्थितिमा ती निष्कृय रहेका क्षमताहरु सकृय हुन जाँदा त्यस जीवको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी या कम स्पर्श गर्न सक्दछ र मानिसले साधारण अवस्थामाभन्दा बढी सुन्ने वा देख्ने क्षमता आएको हुन सक्दछ ।
स्पर्शहरु तेश्रो नेत्रसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् भनेर दाज्न त्यस स्पर्शका साथमा आएको भाव र त्यस स्पर्शका बेलामा भएका अन्य कार्यहरुसँग भर पर्दछ । कुनै लिँग शरीरहरुको याद गरिरहेको बेलामा वा कुनै डराएको घटनाको याद गरिरहेको बेलामा, मरेको मान्छेहरुको चर्चा, पितृहरुको चर्चा, त्यस्तै बारेमा पढेको बेलामा यस्ता स्पर्शहरु आउँछन् ।
ग्रन्थि हरु ;
१. कहिले कहिले आँखाको छेउ तिर केही चित्र देखे जस्तो लाग्ने, तर फर्केर हेर्दा नदेखिने घटना धेरै मान्छेमा घटेको हुन सक्दछ । अस्वस्थ नेत्रको सुरुको अवस्थामा यस्तो स्पर्श र भावहरु ह्ुन्छन् ।
२. अस्वस्थ नेत्रको पछिको अवस्थामा आँखा अगाडिनै चित्रहरु आउने र भावहरु आउने हुन्छन् ।
३. चित्रहरु आँखा अगाडि आउने तर घटनाहरु अन्तै घटिरहेको भनेर भाव आउँछ ।
४. मानिस होसमा हुँदा पनि झ्याप्प झ्याप्प गरेर एक सेकेन्डको तन्द्रा जस्तो गरेर सपनाहरु आउँछ । ५. निद्रा या होस जस्तो गरेर तन्द्रा आएर धेरै बेरसम्म सपनादेखि रहन सक्दछ ।
६. अचानक आँखाबाट आँसु बग्न थाल्ने । यो पितृहरुको चर्चा वा अन्य कष्टहरुको चर्चा गरेको बेलामा हुन्छ । आफ्नो पितृ सँझदा रुने र यो आँसु बग्ने फ्mरक हुन्छ । यहाँ आँखामा आँसु आउँदा रुने भाव कुनै आएको हँुदैन ।
७.आँखा बन्द गर्दा आफु पुरा होसमा हुँदा आँखा अगाडि चित्र आउने या फिल्मको जस्तो गरेर आँखा अगाडि घटनाहरु घट्ने हुन्छ । ती घटनाहरुमा आफु पनि समावेश भइएको हुन सक्दछ ।
यस्तै घटनाहरु हामीले कुनै चिजको कल्पना गर्दा पनि हुन्छ । तर कल्पना गरेको बेलामा आँखा अगाडि आएका चित्र, फिल्ममा आफैलाई नदेख्न सक्छ, या आफुलाई देखे पनि वर्तमान समयको उमेर, पहिरनहरु आउँछन्, चित्रहरु हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ, पात्रहरु हामीले सोचेकाहरु हुन्छन् ।
तर तेश्रोनेत्रका आखा अगाडि आएको दृश्यमा घटना आफै घटिरहेको हुन्छ, घटनाको समय दसौँ, बिसौँ बर्ष अगाडिको हुन सक्दछ, पात्रहरु आफै आइरहेका हुन्छन्, घटनाहरु आफुले कल्पना पनि गर्न नसकिनेहरु हुन्छन्, बिचमा आँखा खोलेर फिल्म नहेर्न मिल्दैन । मानौँ कि कसैले बाँधेर जवरजस्ति हेराइरहेको छ ।
नाक—विभिन्न किसिमका गन्ध आउछन् । जस्तै धुप बालेको वासना अथवा दुर्गन्ध गन्हाउने, मरेको मान्छे जलाएको गन्ध, कुहिएको गन्ध, हस्पिटलको ओषधीको गन्ध, ढल फाेहरको गन्ध या खानेकुराको पकाएको वासना, फलफुलको वासनाहरु र भावना सँगै आउँछ । जस्तो कि कुनै खानेकुराहरु पाक्दै गरेको, मिठो स्वादको यस्तो खाउ भनेर चित्रको साथै भावना आउँछ । नाकबाट अचानक सिँगान बग्ने, नाक बन्द हुने हुन्छ । त्यति खेर त्यस व्यक्तिले त्यस्तै अदृश्य चिजहरुको चर्चा गरिरहेको हुन सक्दछ ।
छाला—छालामा विभिन्न स्पर्शहरु हुने गर्दछ । पछाडिबाट कसैले छुने, हान्ने, तान्ने, घुच्याउने र भावहरु सहित आउँदछ । पछाडिबाट कुनै आइमाईले छोएको, हानेको जस्तो लाग्ने तर पछाडिको भए पनि त्यस्को दृश्य चित्र, पहिरन, गहना देख्न सकिन्छ । पछाडिबाट हानिने चिजको पुरा चित्र, रँग, बुट्टा, सहितको आभास आउँछ । साथै डर त्रास र शरीर चिसो हुने, छालामा काँडा उम्रने, खलखल पसिना आउने हुन्छ । यसै बेला दिमागमा त्यस्तै अदृश्य चिजहरुको कुराहरु याद आइरहेको हुन्छ ।
कान—कानमा विभिन्न आवाजहरु आउने हुन्छ । आँखा र कान मानिसको बढी विकसित अङ्ग भएकोले यस अङ्गहरुमा बढी सम्पर्कहरु हुन्छन । मानिसले कानले सुनेको भाषा बुझ्ने, बोलीको स्वर चिन्ने, अर्थ बुझ्ने हुन्छ । त्यसैले त्यही खालका स्पर्श र आवाजहरु आउने हुन्छन् । कानमा कसैले बोल्ने, कुनै शब्द या वाक्य आउने, कुनै सल्लाह आउने र तिनीहरुको आभास आउने हुन्छ । कानमा बोल्नेहरुको स्वर चिन्न सकिन्छ । कहिले कहीँ आफ्ना चिनेको मान्छेको स्वरमा बोल्ने, नातेदार या साथीहरुको स्वरमा बोल्ने, मरिसकेको मान्छेको स्वरमा बोल्ने, केही माग्ने, सल्लाह दिने वा थर्काउने गर्दछन् । अर्कै ठाउँमा घटिरहेको घटनाको खबरहरु भनिदिन्छन् । कसैलाई अब पानी पर्छ, वा असिना पर्छ भनिदिन्छन् । त्यस्तै गरेर त्यस दिन पानी वा असिना परेको हुन्छ । कोही आफन्त, नातेदार, चिनेकाहरु मरेका छन् भने त्यो खवर २–४ घण्टा वा २—४ दिनपछि आउन सक्थ्यो भने १०— २० मिनटमा कसैले आएर कानमा भनिदिन्छन् ।
जिब्रो, बोली— जिब्रोमा स्वाद आउने, अचानक नमिठो स्वाद वा अचानक मिठो स्वाद आउने हुन्छ । यो मानिसको त्यति विकसित ग्रन्थि होइन त्यसैले धेरै स्पर्श र आभासहरु जिब्रो द्वारा हुदैनन् । तर बोली, शब्दहरु बढी विकसित भएकोले शब्द र बोलीहरुमा बढी सम्पर्क आइरहेको हुन्छ । जस्तै अचानक कुनै शब्द मुखमा आउने, कुनै वेदशास्त्रका मन्त्रहरु मुखमा आउने हुन्छ । ती मन्त्रहरु पहिला जानेका पनि हुन सक्दछन् वा कहिल्यै नसुनेका पनि हुन सक्दछन् । मुखमा कुनै गीतका टुक्राहरु, कविताका टुक्राहरु, स्तुतिका टुक्राहरु आउँछन र सँगसँगै भाव आइरहेको हुन्छ । मनमा कुनैकुरा खेलिरहेको हुन सक्दछ भने या कुनैप्रश्नहरु उब्जिएका छन भने त्यस्को उत्तर जस्तो भावका शब्द, वाक्यहरु, कविताका टुक्रा, गीतका, स्तुतिका टुक्राहरु, मन्त्रहरु आएका हुन्छन् । अचानक पहिला घटेका कुराहरु, इतिहासका कुराहरु, भविष्यका कुराहरु, वेदशास्त्रका कुराहरु जुन उस्ले कहिले पनि पढेको छैन ती कुराहरु भन्न सक्दछन् । देवी देवताका परिचय वा तिनका गुणहरुका कुराहरु गर्न सक्दछन् । कुनै घटना अन्तै घटि सकेको छ भने तर त्यहाँ कसैलाइ थाहा छैन भने मुखबाट आफै शब्द निकालेर बोली दिन्छन् । ओँठहरु थर्थरकाम्दै आफै शब्दहरु निस्कन्छन् र भावहरु आइरहेको हन्छन् ।
मुखमा आफ्नै शब्दका टुक्राहरु आउँनेको तिन प्रकारका हुन्छन ।
क. पहिलो स्तर —कष्ट दुःखका कुराहरु आउछन् जुन अति असक्त, अस्वस्थ अवस्था हुँदा आउने गरेको हुन्छ ।
ख. दोश्रो स्तर— बिरामीले आफन्तहरुको सहयोग गर्ने र बिरामीले गुहार पाउन थालेपछि ती आउने शब्दहरुमा शिक्षा, सल्लाह, उपायहरु, रहस्यहरु, उत्तरहरु बताइ दिने गरेर आउँछन् ।
ग. तेस्राे स्तर—कष्टहरु एकदमै कम भइ सकेको अवस्था आएको हुन्छ । शिक्षाहरु पनि अलि घट्न थालेको हुन्छ र अव हाँसि मजाकका कुराहरु, तिनै केही खबरहरु, उत्तरहरु मजाकको भाषामा आउने हुन्छ । यो हाँसि मजाकका कुराहरु पछि सम्म पनि कहिले कहीँ हुँदै गरेको हुन्छ ।
यि सबै ग्रन्थिका स्पर्शहरु मानिसको साधारण अवस्थामा मात्रै स्पर्श गर्न सक्ने सिमाना कटेर अन्य जनावर जीवहरुको गुणहरु सँग मिल्न जाने गुणहरुका सिमानामा पुगेर स्पर्श हुन पुगेको हो । यिनै स्पर्शका माध्यमबाट अदृश्य लिँग शरीरहरु हामीसँग सम्पर्कमा आएको हुन्छ ।
यी आवरणहरु पर्दा जस्तो भएर बसेको हुन्छ र त्यस पर्दा बाहिरको स्पर्श हामीमा आएको हुँदैन । यी पर्दाहरु पातलो भएको, पर्दा च्यातिएको, मानिस आफु पर्दाको एकदम नजिक पुगेको अवस्थामा हुन आएका स्पर्शहरु हुन् । या पर्दाको नजिक पुगेर केही चिजको शङ्का भएकोले धेर बेर कान लगाएर एकान्तमा सुन्न खोज्दा सुनिन आएको अवस्थामा त्यस पर्दा बाहिरका आवाज, चित्र, बोली, भावहरु स्पर्श हुन आएका हुन् ।